Ukudalulwa Okuhlobene - BikeHike
Ukugibela kanye Nezempilo
Guqula ifomu lokusesha
Ukudalulwa Kokuxhumana Kwezinto: Ezinye zezixhumanisi kule webhusayithi ziyizixhumanisi ezihambisanayo. Lokhu kusho ukuthi uma uchofoza isixhumanisi futhi uthenge into, umnikazi wale webhusayithi uzothola ikhomishini esebenzisana nayo. Noma ngabe, umnikazi wale webhusayithi uncoma kuphela imikhiqizo noma amasevisi azongeza inani kubafundi. Umnikazi wale webhusayithi udalula lokhu ngokuhambisana ne-Federal Trade Commission's 16 CFR, Ingxenye 255: Imihlahlandlela Ngokuphathelene Nezincazelo Nezincazelo Zokukhangisa.
Le webhusayithi ingase yamukele amafomu okukhangisa ngemali, uxhaso, ukufakwa okukhokhelwayo noma ezinye izindlela zesinxephezelo.
Isinxephezelo esitholiwe singaba nomthelela kokuqukethwe kokukhangisa, izihloko noma okuthunyelwe okwenziwe kule webhusayithi. Lokho okuqukethwe, indawo yokukhangisa noma okuthunyelwe kungase kungaphawulwa njalo njengokuqukethwe okukhokhelwayo noma okuxhasiwe.
Abanikazi bale webhusayithi banganxeshezelwa ukuze banikeze imibono ngemikhiqizo, amasevisi, amawebhusayithi nezinye izihloko ezihlukahlukene. Noma abanikazi bale webhusayithi bethola isinxephezelo ngokuthunyelwe kwethu noma izikhangiso, sihlala sinikeza imibono yethu ethembekile, esikutholile, izinkolelo, noma ulwazi ngalezo zihloko noma imikhiqizo. Imibono nemibono evezwe kule webhusayithi ingeyombhali kuphela. Noma isiphi isimangalo somkhiqizo, izibalo, ikhwothi noma okunye ukumelwa mayelana nomkhiqizo noma isevisi kufanele kuqinisekiswe nomkhiqizi, umhlinzeki noma inhlangano okukhulunywa ngayo.
Le webhusayithi ayiqukethe noma yikuphi okuqukethwe okungaletha ukungqubuzana kwenzalo.
I-Amazon Associates Programme Disclaimer
I-bikehike.org ibambe iqhaza kuhlelo lwe-Amazon Services LLC Associates, uhlelo lokukhangisa oluyinxusa oluklanyelwe ukunikeza amasayithi indlela yokuthola imali yokukhangisa ngokukhangisa nokuxhumana ne-Amazon.com. I-Amazon, ilogo ye-Amazon, i-AmazonSupply, kanye nelogo ye-AmazonSupply izimpawu zokuthengisa ze-Amazon.com, Inc. noma amanxusa ayo.
Ama-Amazon Affiliate Links
Okuthunyelwe kwebhulogi kungase kuqukathe izixhumanisi ze-Amazon, okusho ukuthi, uma uchofoza futhi uthenge Manje noma ubhalisela uhlelo lwe-Amazon, i-bikehike.org ingathola ikhomishini. Lokhu akunazindleko ezengeziwe kuwe.
I-Bikehike.org Ibambe iqhaza kuhlelo lwe-Amazon LLC Associates